Iyo inogadzira Realme ichaunza yekutanga Android neMagSafe tekinoroji | IPhone nhau
Apple yakaunza MagSafe tekinoroji mumaoko eiyo iPhone 12, yemagineti kuchaja system iyo akanyara kuteedzera iyo inogadzira Realme uye yakanzi MagDart. Ichi chiziviso hachisi mhedzisiro, nekuti anga ari iye CEO wekambani, Madan Sheth uyo akasimbisa nhau kuburikidza ne tweet.
Nguva pfupi yapfuura, masangano ekutaurirana anoshanda naReme, atumira email ichisimbisa kuti Chipiri chinotevera, Nyamavhuvhu 3, Realme ichaunza yekutanga isina waya yemagineti charger yeApple pachiitiko realme Magnetic Kugadziridza.
Zvinoenderana nemifananidzo yakawanikwa neGMMArena neGizmochina, iyo MagDart ichave ichiwanikwa mushanduro mbiri. Yekutanga iri diski yakafanana neiyo Apple yepamutemo yeMagSafe charger uye inopa simba rekuchaja rinosvika ku15W.
Wechipiri modhi ndeye Ini ndinoratidza kuti inosanganisira fan kuchengetedza tembiricha yechigadzirwa inodzorwa nguva dzese. Mukudzoka, iyo ichapa yakanyanya kusimba system yekuchaja uye, sekureva kwekambani, "ichakwikwidza nekukurumidza tambo kuchaja tekinoroji."
Ose maviri emhando dzechaja ichaenderana neRealme Flash, iyo inotevera smartphone iyo kambani inoronga kuvhura pamusika uye izvo zvingangoendeswa pamwe chete neMagDart, nekuti zvikasadaro hapana mukana wekuratidzira magnetic charger yeiyo smartphone iyo isati yave pamusika.
Gore rakapera, uyu mugadziri akaunza iyo 125W SuperDart charger, chishandiso chinokwanisa kuchaja chero smartphone mumaminetsi mashoma. Ini handikwanise kunyatsonzwisisa mania evamwe vagadziri vekutsvaira zvigadzirwa zvavo pamberi penguva zvichibva pamitengo inokurumidza. Hapana anorara usiku? Pane chero munhu anogona kuchaja yavo smartphone ivo vachirara ne5w charger senguva dzose kuti vasatambura nebhatiri? Zvisinei.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Kupikisana » Android » Iyo inogadzira Realme ichaunza yekutanga Android nehunyanzvi hweMagSafe
Ita hurukuro yako yekupedzisira.
Ndozvandinogara ndichitaura. Chii chiri kudiwa kubhadharisa nhare husiku pane spidhi yakakwira kupfuura 5w -1A semachaja ehupenyu hwese?
Iwe hauna chikonzero chekudziya nekuparadza iyo inokurumidza-kuchaja bhatiri husiku nekuve wakazara uchizadza kana iwe uine maawa pamberi pako.
Parizvino Apple inofanira kuisa sarudzo yekuchaja iyo iPhone husiku otomatiki kunonoka kuchaja.
Izvo hazvichakwanise kudzikisira kune iOS 14.6